Fan Sign Event သွားဖို့ ပြောခဲ့ရတဲ့ IU’s Manager – Korea Celebrities Fans
Fan Sign Event သွားဖို့ ပြောခဲ့ရတဲ့ IU’s Manager
IU ရဲ့ မန်နေဂျာဟာ IG မှာ သူနဲ့ IU တို့ပြောထားတဲ့ message ကို Screenshoot ရိုက်ကာ ပရိတ်သတ်တွေကို ပြထားပါတယ် ။ ဒီပုံကတော့ IU ဟာ ပရိတ်သတ်တွေကို ဘယ်လောက်အထိ အလေးထားတယ် ၊ ဘယ်လောက်အထိ သစ္စာရှိတယ်ဆိုတာကို ပြသလိုက်တာပါပဲ ။
Manager : မနက်ဖြန် ၁၁ နာရီ မတိုင်ခင် လာခေါ်မယ် ။
IU : ဘာလို့လဲ ?
Manager : 11 နာရီခွဲ ပြီးနိုင်အောင်လုပ်ပါ ။
Manager : Fans Sign Event အချိန်ဇယားရှိတယ် ။
Manager : ပရိတ်သတ်တွေကို ကတိပေးထားတယ်လေ ?
IU : ဟုတ်သားပဲ
ဒီ မက်ဆေ့က IU ဘယ်လောက်အလုပ်များနေလဲ ဆိုတာဖော်ပြနေပါတယ် ။ မန်နေဂျာရဲ့ ပြောစကားတွေကို IU က ဘာလို့လဲ လို့သာဖြေနေပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လုပ်ပဲ အလုပ်များပါစေ ပရိတ်သတ်တွေထက်ပိုအရေးကြီးတာ IU မှာမရှိပါဘူး ။
지금 만나러 갑니다 💃🏃‍♀️🏃‍♂️🕺 #이번정류장은영등포입니다 #미세먼지도막을수없엇#콜록콜록
A post shared by 정한터 (@hanteooo) on May 6, 2017 at 9:34pm PDT
Previous Previous post: Baekhyun ကို မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးရင် ပျော်ရွှင်နေတဲ့ Chanyeol
Next Next post: အဖွဲ့ဝင်အသစ်ဝင်လာပြီးမှ ပိုလူသိများလာတဲ့ Kpop Girl Band များ